Faran'ny herinandro any Milan - Tolotra sidina miampy hotely telo hotel | Vaovao momba ny dia
Tolotra faran'ny herinandro any Milan, sidina miampy hotely
Susana godoy | | tolotra
Tianay izany rehefa mahita ireo sidina miampy hotely misy hotely izahay. Satria tsy misy isalasalana, rehefa manao ny kaonty isika dia mahatsapa fa mahasoa kokoa izany. Izany no hitanay ho anao. ny tolotra faran'ny herinandro any Milan, mba hahafahanao manararaotra fialamboly tantaram-pitiavana tonga lafatra.
Indraindray manana fotoana isika nefa mieritreritra fa ho lafo lavitra noho ny tena izy ny dia. Noho izany, amin'ny tolotra faran'ny herinandro any Milan, azonao atao ny manomboka ny volana Febroary amin'ny fomba tsara indrindra. Mbola manana fotoana hieritreretana ianao, fa tsy be loatra satria ity karazana tolotra, manidina izy ireo ary tsy nilaza mihitsy.
1 Flight + hotely mandritra ny faran'ny herinandro any Milan
2 Inona no ho hitanao any Milan amin'ny andro nahatongavanay
3 Andro voalohany tany Milan
4 Andro faharoa any Milan
Flight + hotely mandritra ny faran'ny herinandro any Milan
Ny faran'ny herinandro any Milan dia tena manokana. Satria nahita ny iray amin'ireo tolotra izay tsy dia mora lany izahay. Raha atotaly, telo alina hankafizana amin'ny iray amin'ireo toerana manaitra indrindra. Ity tolotra ity dia misy ny sidina sy ny fijanonana. Ny toerana voafidy dia ny Hotel Residence Zumbini, izay manana efitrano 50 misy fahitalavitra sy fifandraisana Wi-Fi maimaim-poana. Ho fanampin'izay, manana lakozia zaraina ianao raha te-hihinana sakafo any amin'ny trano fisakafoanana. Mazava ho azy, mitokana ny trano fidiovana.
Ity trano fandraisam-bahiny ity dia eo amin'ny 3,4 kilometatra miala ny eo afovoany. Inona no mahatonga ny toerana misy azy ho tonga lafatra indrindra hifandraisana. 5 kilometatra fotsiny dia hanana ny Katedraly Milan sy 4 ny National Museum. Noho izany, na ny akaiky azy na ny fahatsorany, dia ahafahantsika manana toerana tsara ipetrahana. Hatramin'ny atoandro dia hiala amin'ny lafiny iray mankany amin'ny lafiny iray isika, toy ny mahazatra. Ka, na ny sidina na ny telo alina amin'ity toerana ity dia hitentina 172 euro amintsika, olona. Raha maharesy lahatra anao ilay hevitra dia azonao atao ny mametraka ny famandrihanao ao Minitra farany.
Inona no ho hitanao any Milan amin'ny andro nahatongavanay
Rehefa tonga amin'ny toerana alehantsika amin'ny tolakandro isika dia mbola mila mandeha any amin'ny hotely ary amin'ny farany dia mandeha ny fotoana. Noho izany, ny azontsika atao dia ny manatona ireo arabe na kianja misimisy indrindra ary mitondra azy am-pialam-boly, mankafy hariva mahafinaritra. ny Kianja Duomo Izy io dia teboka fanombohana tsara ho an'ny faran'ny herinandro any Milan.
Any no hihaonanao ny Katedraly Milan. Iray amin'ireo trano marika. Maherin'ny 157 metatra izy dia iray amin'ireo katedraly lehibe indrindra eto an-tany. Nanomboka tamin'ny 1386 ny fananganana azy fa naharitra taonjato dimy mahery. Noho io antony io dia maro ny style mifangaro ao. Noho izany, afaka mankafy ny toerana sy ny arabe manodidina isika. Na ny 'Via Dante' na ny 'Plaza della Scala' dia zava-dehibe ihany koa.
Andro voalohany tany Milan
Amin'ny maraina dia afaka manatona akaiky kokoa isika 'Piazza Mercanti'. Izy io dia iray amin'ireo tsara indrindra afaka ankafizintsika. Ho hitantsika eto ny 'Palazzo della Ragione'. Trano iray izay hanavahantsika noho ny biriky mena sy izay notokanana tamin'ny 1233. Ny sarivongana ary koa ny palitao fitaovam-piadiana dia manome antsika an'i 'Loggia degli Osli', izay nanambarana hetsika maro samihafa.
Ny iray izay sekoly nalaza indrindra koa tamin'ity fotoana ity ary koa ny 'Casa dei Panigarola' sy 'Palazzo de Giureconsulti'. Ao amin'ny Via Dante dia hahatratra trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana marobe izahay fa ho somary lavitra kosa dia ho hitantsika ny 'Sforzesco Castle'. Firavaka hafa hitsidika. Azo antoka fa aorian'ity fizarana ity, ho an'ny tolakandro, dia handeha hitsidika ireo fivarotana emblematika indrindra izahay na hijanona ao amin'ny kafe hisakafoanana sy hankafizany ny sakafo manokan'izy ireo.
Andro faharoa any Milan
Afaka miakatra amin'ny antso ianao 'Fasana Monumental'. Ho an'ny maro, tsy io no fijanonana voalohany an-tsain'izy ireo, fa ho an'ny ankamaroan'ny maro dia karazana tranombakoka io fa eny ivelany. Hatramin'izay dia ho hitantsika ireo sary sokitra italiana maro ary koa ireo tempoly grika. Amin'ny fidirana dia efa azontsika atao ny mankasitraka ny fasan'ny sasany amin'ireo anarana malaza indrindra amin'ny toerana. Misy ihany koa ny kinova kely iray an'ny 'Column of Trajan'. Ny fiangonan'i Santa María delle Grazie dia liana ihany koa, indrindra satria mirakitra ny 'Fanasana Farany' nataon'i Leonardo da Vinci. Iray amin'ireo sary hosodoko malaza indrindra, saingy eny, raha te hahita azy dia mila mamandrika mialoha ianao.
Raha te hanohy amin'ny faritra akaiky anao indrindra ianao, dia hihaona amin'ny Basilika any Saint Ambrose. Izy io dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, tamin'ny fomba Romanesque. Manana tilikambo biriky amin'ny haavo samy hafa izy, saingy misarika ny saina betsaka. Afaka mitsidika azy ianao amin'ny maraina ary koa amin'ny tolakandro, koa aza maika. Aorian'izany dia afaka mandeha any amin'ny Museum Archaeological Museum na ny Church of San Maurizio ianao. Na dia tsy afaka manadino ny Fiangonan'i San Lorenzo Maggioresatria izy no zokiny indrindra any Milan. Ao amin'ny 'Pinacoteca Ambrosiana' dia ahitanao efitrano 24 misy sanganasa tena lehibe nataon'i Leonardo da Vinci na Caravaggio, ankoatry ny hafa. Raha mbola manana fotoana sisa tavela isika dia hamakivaky ireo arabe manan-danja indrindra, satria hahita tsiambaratelo tsy misy farany toa ny manodidina an'i Navigli, miaraka amin'ireo lakandranon'izy ireo izy ireo. Faran'ny herinandro feno any Milan!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » tolotra » Tolotra faran'ny herinandro any Milan, sidina miampy hotely
Ismael Cazares dia hoy izy:
tsara fa mila manandrana ny specials ianao misaotra.
Valiny tamin'i Ismael Cazares
Susana godoy dia hoy izy:
Misaotra anao Isimaela !.
Mamaly an'i Susana Godoy
Nosy Gili tsara tarehy
Distrikan'ny Jiro Mena any Amsterdam